Funda malunga neeNyuvesi zase-Cal State
Funda Ngezikolo ezingama-23 ezenza i-California State University System
Inkqubo yaseCalifornia State University yenziwe ngama-23 eenyuvesi . Ngabafundi abangaphezu kwama-400 000, yinkqubo enkulu kakhulu yeekholeji zeminyaka emine kweli lizwe. Iilunivesithi zamalungu ziyahluka kakhulu ngobukhulu, amandla okufunda kunye nokukhetha. Qiniseka ukuba ucofa kwigama lesikolo ukuze ufunde kabanzi ngeyunivesiti kunye noko kuthatha ukuthatha ukufumana.
Khangela kwakhona la manqaku:
I-SAT Isatifiketi yokuqhathanisa ne-Cal State
UMTHETHO Umzobo wokuthelekisa weCal State
I-Cal State Bakersfield Mascot, Rowdy the Roadrunner. John Gurzinski / Getty Izithombe
I-Cal State Bakersfield ikhona kwi-campus engama-375 ekre e-San Joaquin Valley, phakathi kweFresno naseLos Angeles. Iyunivesithi inikeza iinkqubo ezingama-31 ze-degree degree kunye neenkqubo ezili-17 zeeprogram. Phakathi kwezifundo zokugqibela, ulawulo lwezoshishino kunye nobugcisa be-liberal kunye nezesayensi yizona zijongi ezidumileyo.
Indawo: Bakersfield, eCalifornia
Ubhaliso: 9,341 (8,179 abaphumelele phantsi)
Ukwamkelwa: I- GPA, umlinganiselo we-SAT kunye negraphic score graph
Ukufumana iinkcukacha kwiindleko, uncedo lwezemali, amaxabiso okuwamkela kunye nokunye, funda iPal State Bakersfield profile .
Islands Islands (CSUCI)
I-Bell Tower kwi-CSUCI, i-Cal State University Channel Islands. UStephen Schafer / Wikimedia Commons
I-CSUCI, iYunivesithi yeSikolo saseCalifornia, iIs Channel Islands, yasungulwa ngo-2002 kwaye ingumncinci kwiiyunivesithi ezingama-23 kwi-Cal State. Iyunivesithi itholakala enyakatho-mpuma yeLos Angeles. Phakathi kweentloko ezingama-20, i-shishini, i-social sciences kunye nobugcisa be-liberal ziyabonakala ngokufanayo phakathi kwezifundo zakudala. Ikharityhulam ye-CSUCI igxininisa ukufunda nokufunda ngenkonzo.
Indawo: Camarillo, eCalifornia
Ubhaliso: 6.611 (aba-6 355 abafundele phantsi)
Ukufumana idatha kwiindleko, uncedo lwezemali, amaxabiso okuwamkela kunye nokunye, funda iphrofayili ye-CSUCI .
State Chico (CSUC)
Kwinqanaba likazwelonke, iChico ibonakala rhoqo phakathi kweeyunivesithi eziphezulu zeNtshona Koloni. Okokuqala kuvuliwe ngo-1889, iProvense yaChico yileyesibili yezona ziko-dolophu ze-Cal State. I-Chico State inikeza iinkqubo ezingaphezulu kwe-150 ze-grade-degree. Abafundi abaphumeleleyo bafanele bajonge kwiProgram ye-Chico State Honours yokufikelela kwiiklasi ezincinci nezinye izinto.
Indawo: Chico, California
Ukubhalisa: i-17,557 (i-16,471 zezifundo zakudala)
Ukufumana iinkcukacha kwiindleko, uncedo lwezemali, amaxabiso okuwamkela kunye nokunye, funda iphrofayili yase State Chico .
KwiDominguez Hills (CSUDH)
I-StubHub Centre kwi-CSUDH. I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-Cal State yaseDominguez Hills 'i-campus ye-346-ekre ihlala ngaphakathi kwemizuzu yedolophu yaseLos Angeles kunye neLwandle lwasePacific. Isikolo sinikeza iinkqubo ze-bachelor ezingama-45; Ulawulo lwezoshishino, imfundo ye-liberal kunye noongikazi yizona zijongi ezidumileyo phakathi kwabafundi bokuqala. Abafundi be-CSUDH bamele amazwe angama-90. Abalandeli bezemidlalo mabaqaphele ukuba i-Home Depot Centre ikhona kwikampus.
Indawo: Carson, California
Ubhaliso: 14,731 (aba-12,685 abaphumelele phantsi)
Hlola i-Campus: I- CSUDH Photo Tour
Ukufumana idatha kwiindleko, uncedo lwezemali, amaxabiso okuwamkela kunye nokunye, funda iphrofayili yaseCal State yaseDominguez Hills .
I-CSUEB, i-California State University yase-East Bay. Josh Rodriguez / flickr
Inkampani yaseCal State yase-East Bay ihlala eHayward Hills ngeembono ezintle zaseSan Francisco Bay. Iyunivesiti inikeza iinkqubo ezingama-49 ze-bachelor kunye neeprogram ze-master degree. Phakathi kwezifundo zokugqibela, ulawulo lwezoshishino lulona lukhulu kakhulu oludumileyo. IYunivesithi yenze i-nation recognition of its value kunye neNewmanman Learning Communities.
Indawo: Hayward, California
Ubhaliso: 15,855 (aba-13,407 abafundele iidanga)
Ukufumana idatha kwiindleko, uncedo lwezemali, amaxabiso okuwamkela kunye nokunye, funda iprogram yeCal State East Bay .
I-Fresno State ithatha i-388-acre campus eyinqanaba elingaphantsi kweentaba zaseSierra Nevada malunga nephakathi kweLos Angeles neSan Francisco. Isikolo seFresno esihloniphekileyo se-Craig iSikole sezoShishino sithandwa ngabantu, kwaye ukuphathwa kwezoshishino kunobhaliso oluphezulu kakhulu lwabafundi bezithuba eziphezulu. Abafundi abaphumeleleyo bafanele bajonge kwiKholeji ye-Smittcamp Honors enikezela ngeengxowa-mali zokufunda, indawo kunye nebhodi.
Indawo: Fresno, California
Ubhaliso: 24,405 (21,530 abaphumelele kwizifundo zakudala)
Ukufumana iinkcukacha kwiindleko, uncedo lwezemali, amaxabiso okuwamkela kunye nokunye, funda iprofayili yaseFresno .
Iziko loLonwabo lwabafundi kwi-CSUF, i-California State University i-Fullerton. I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-Cal State i-Fullerton yenye yeyunivesithi ezinkulu kwi-California State University system. Isikolo sinikeza iinkqubo ezingama-55 ze-bachelor's and 50 degree degree. Ibhizinisi yiprogram eyaziwayo kakhulu phakathi kwezifundo zakudala. I-yunivesithi ye-236-ekre ikolakala e-Orange Country kufuphi naseLos Angeles.
Indawo: Fullerton, California
Ubhaliso: 40,235 (34,576 izifundo eziphantsi)
Hlola i-Campus: Uhambo lwe-Photo lwe-CSUF
Ukufumana idatha kwiindleko, uncedo lwezemali, amaxabiso okuwamkela kunye nokunye, funda iprogram yeCal State Fullerton .
EHumboldt State University. Cameron Ifoto / Flickr
I-Humboldt State University yizona zikolo ezisenyakatho zeZikolo zaseCal State, kwaye ihleli eceleni kwehlathi elibomvu kwaye lijongene neLwandle lwasePacific. Abafundi banokufikelela okulula ukuhamba, ukubhukuda, ikhenkethi, inkampu kunye neminye imisebenzi yangaphandle kule ngxoworha ecebileyo eNyakatho yeKalifornia. Iyunivesiti inikeza iiprogram ze-bachelor degree degree.
Indawo: Arcata, California
Ukufumana iinkcukacha kwiindleko, uncedo lwezemali, amaxabiso okuwamkela kunye nokunye, funda iprogram yeHumboldt State .
Ibanga elide (CSULB)
Iziko loLonwabo lwabaFundi kunye neZiko loLondolozo kwi-CSULB. I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-Cal State Long Beach iye yanda ukuba ibe enye yeyunivesithi enkulu kwi-CSU. I-acre campus engama-323 isendaweni yaseLos Angeles kwaye ibonisa ukutyeba kwezinto ezibonakalayo kunye neentlobo ezibonakalayo zemidlalo yepiramidi. I-CSULB ihlala izuza amanqaku aphezulu ngokuxabisa kwayo, kwaye iyunivesiti inikezwe isahluko sePhi Beta Kappa ngenxa yamandla alo kwezobugcisa be-liberal. Ulawulo lwezoshishino lulona luphawu olugqithiseleyo phakathi kwabafundi bokugqibela.
Indawo: Ibhendi ende, iCalifornia
Ubhaliso: 37,776 (32,345 abafundele phantsi)
Hlola i-Campus: I- CSULB Photo Tour
Ukufumana idatha kwiindleko, uncedo lwezemali, amaxabiso okuwamkela kunye nokunye, funda iprofile ye-CSULB .
I-CSULA, i-California State University yaseLos Angeles. Justefrain / Wikimedia Commons
I-Cal State iLos Angeles itholakala kwi-University Hills isithili se-LA Inyuvesi inika iiprogram ze-59 zezifundo eziphambili kwiikholeji ze-bachelor, kunye neeprogram ze-51 zezifundo. Phakathi kwezifundo zokugqibela, iiprogram zolawulo lwezoshishino, imfundo, ubulungisa bobugebengu kunye nomsebenzi wentlalo yinto ethandwa kakhulu.
Indawo: Los Angeles, California
Ubhaliso: 27,827 (24,074 izifundo zakudala)
Hlola i-Campus: I- CSULA Tour Tour
Ukufumana idatha kwiindleko, uncedo lwezemali, amaxabiso okuwamkela kunye nokunye, funda iprofile ye-CSULA .
IMaritime (California Maritime Academy)
Umkhumbi wokuQeqesha iMaritime, i-Golden Bear. I-Embassy yase-US / Flickr
I-Cal Maritime yiyona kuphela i-degree-grant grant academy eWest Coast. Ikharityhulam idibanisa imfundo yamasiko eklasi kunye nokuqeqeshwa kobugcisa kunye nokufunda ngokufunda. Impawu eziyingqayizivele yemfundo ye-Cal Maritime yinkwenkwezi yoqeqesho lwehlabathi leenyanga ezimbini kwiyunivesithi, i-Golden Bear. Isikolo sisona sincinane kunazo zonke kwaye sisona sikhethekileyo kwinkqubo yeCal State.
Indawo: Vallejo, California
Ubhaliso: 1,107 (zonke iidanga lokugqibela)
Ukufumana idatha kwiindleko, uncedo lwezemali, amaxabiso okuwamkela kunye nokunye, funda iPal Maritime profile .
I-Monterey Bay (CSUMB)
IWCED Library. CSU Monterey Bay / Flickr
Eyasungulwa ngo-1994, iNyuvesi yaseCalifornia State eMonterey Bay yisesibini yesikolo esincinane kunazo zonke kwiCal State. Isimiso esinqabileyo sogu lolwandle sinomda omkhulu. Amava e-CSUMB aqala ngethuba leminyaka yokuqala yonyaka kwaye iqukumbela ngeprojekthi eyintloko yamatye. Iyunivesithi inamabhentshini amabini ophando ekufundeni i-Monterey Bay, kwaye iiprogram zokuphanda iinkonzo kunye neeproduate ziqhelekile.
Indawo: uLwandle lwaseCalifornia
Ubhaliso: 7274 (6,758 abaphumelele phantsi)
Ukufumana idatha kwiindleko, uncedo lwezemali, amaxabiso okuwamkela kunye nokunye, funda iprofayile ye-CSUMB .
I-CSUN, i-California State University Northridge. Cbl62 / Wikimedia Commons
I-Cal State Northridge ye-365-acre campus ifumaneka eLos Angeles 'eSan Fernando Valley. Iyunivesithi yenziwe iikholeji ezithoba ezinikezela iiprogram ze-bachelor kunye neiprogram ze-master degree. Ulawulo lwezoshishino kunye neengqondo zezona zinto zidume kakhulu phakathi kwe-CSUN. Iyunivesithi inamanqaku aphakamileyo kwiinkqubo zayo kumculo, ubunjineli kunye nezoshishino.
Indawo: Northridge, California
Ubhaliso: 39,916 (35,756 izifundo zakudala)
Ukufumana iinkcukacha kwiindleko, uncedo lwezemali, amaxabiso okuwamkela kunye nokunye, funda iphrofayili yeKal State Northridge .
I-Cal Poly Pomona Library yokungena. UVictorrocha / Wikimedia Commons
I-campus yaseCol Poly Pomona i-1,438-acre campus ihlala kwicala lasempumalanga yeLos Angeles. Iyunivesithi yenziwe ngeekholeji zemfundo ezisibhozo kunye nezoshishino ziprogram eyaziwayo kakhulu phakathi kwezifundo zakudala. Umgaqo okhokelayo wekharityhulam yeCal Poly kukuba abafundi bafunda ngokwenza, kwaye iyunivesithi igxininisa ukuxazulula ingxaki, uphando lwabafundi, izifundo zokufunda kunye nokufunda ngenkonzo. Ngamaqela kunye nemibutho engaphezu kwama-280, abafundi baseCal Poly baxakeke kakhulu kwi-campus life.
Indawo: Pomona, California
Ubhaliso: 25,326 (23,733 izifundo zakudala)
Ukufumana idatha kwiindleko, uncedo lwezemali, amaxabiso okuwamkela kunye nokunye, funda iphrofayili yeCol Poly Pomona .
I-Sacramento State University Sign (cofa umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-Sacramento State iyaziqhenyca kumzimba wayo wemfundo. Iklasi le-ekra-300 yesikolo inikezela abafundi ithuba lokufikelela lula kwiindlela ezihamba nge-American River Parkway kunye neendawo zezoLonwabo zaseFolsom kunye ne-Old Sacramento. Iyunivesiti inikeza iinkqubo ezingama-60 ze-digroate degree. Abafundi abaphumeleleyo bafanele bajonge kwiProgram ye-Sac State Honors.
Indawo: Sacramento, California
Ubhaliso: 30,510 (27,951 abafundi bee-graduate)
Hlola i-Campus: I-Tour State Photo Tour
Ukufumana iinkcukacha kwiindleko, uncedo lwezemali, amaxabiso okwamkelwa kunye nokunye, funda iprogram ye - Sacramento State .
ISan Bernardino (CSUSB)
Ikholeji yeMfundo kwi-CSUSB, i-California State University yaseSan Bernardino. Amerique / Wikimedia Commons
I-Cal State iSan Bernardino inikeza iinkqubo ezingaphezulu kwe-70 ze-bachelor kunye ne-master degree degree. Iyunivesithi iyazimela ngokungafaniyo komzimba wabafundi kunye nenyaniso yokuba akukho zininzi zentlanga kwi-campus.
Indawo: San Bernardino, California
Ubhaliso: 20,767 (i-18,476 izifundo zakudala)
Ukufumana iinkcukacha kwiindleko, uncedo lwezezimali, ixabiso lokumkela kunye nokunye, funda iphrofayli yeKal State San Bernardino .
KwiYunivesithi yaseSan Diego State. Geographer / Wikimedia Commons
IYunivesithi yeSizwe yaseSan Diego iphakame kakhulu ekufundeni kwamanye amazwe - abafundi be-SDSU banokukhethwa kwezifundo ezingama-190 ezivela kwamanye amazwe. IYunivesithi inesiGrike esisebenzayo esinamaqela angaphezu kwama-50 kunye neentlekele. Ulawulo lwezoshishino luyinto eyaziwayo kakhulu kwi-SDSU, kodwa amandla esikolweni kwi-liberal arts kunye nezesayensi ayifumana isahluko seqela elihloniphekileyo le- Phi Beta Kappa .
Indawo: San Diego, California
Ubhaliso: 34,688 (i-29,860 izifundo zakudala)
Hlola iCampus: Uhambo lwe-Photo SDSU
Ukufumana idatha kwiindleko, uncedo lwezemali, amaxabiso okuwamkela kunye nokunye, funda iphrofayili yaseSan Diego State University .
State of San Francisco
IQumrhu leYunivesithi yaseSan Francisco State University. Michael Ocampo / Flickr
I-San Francisco State University iyaziqhenya ngokuhlukana komzimba wabafundi - i-67% yezifundo eziphantsi kootitshala abafundi bombala, kwaye abafundi bavela kumazwe angama-94. Isikolo sibhalisa abafundi abangaphezu kwamazwe ngamazwe kunanoma yiphina i-degree-master-granting university. I-San Francisco State inikeza iinkqubo ezili-115 ze-bachelor degree kunye neeprogram ze-95 zenkosi.
Indawo: San Francisco, California
Ubhaliso: 29,045 (25,945 abaphumelele phantsi)
Ukufumana idatha kwiindleko, uncedo lwezemali, amaxabiso okuwamkela kunye nokunye, funda i- profile yaseSan Francisco .
KwiYunivesithi yaseSan Jose State. Nick Kinkaid
I-campus yase-San Jose State University ye-154-acre campus ifumaneka kwiibhloko ezili-19 ezikuloo dolophu yaseSan Jose. Iyunivesiti inikeza iinkqubo ze-bachelor kunye ne-master degree kwii-134. Ulawulo lwezoshishino lulona lukhulu kunabo bonke abadlulileyo, kodwa iyunivesithi ineenkqubo ezininzi ezinamandla kuquka iinkalo zonxibelelwano, ubunjineli kunye nobugcisa.
Indawo: San Jose, California
Ubhaliso: 32,154 (i-26,432 izifundo zakudala)
Ukufumana idatha kwiindleko, uncedo lwezemali, amaxabiso okuwamkela kunye nokunye, funda i- profile yeSan Jose State .
I-San Luis Obispo (iCol Poly)
Iziko leSayensi kunye neMathematika eCal Poly San Luis Obispo. John Loo / Flickr
I-Cal Poly, iCalifornia Polytechnic Institute eSan Luis Obispo, ihlala ikhethiweyo njengenye yezona zikolo zenzululwazi kunye nezobunjineli kwizinga le-grade. Izikolo zayo zokwakha kunye nezolimo nazo zikwahluleka kakhulu. I-Cal Poly ine "sifunde ngokwenza" ifilosofi yemfundo, kwaye abafundi benza oko kanye kwi-campus ehamba phambili yeeyure ezili-10 000 eziquka i-ranch nesidiliya.
Indawo: San Luis Obispo, eCalifornia
Ubhaliso: 21,306 (20,426 abaphumelele phantsi)
Ukufumana idatha kwiindleko, uncedo lwezemali, amaxabiso okuwamkela kunye nokunye, funda iprogram yeCal Poly .
ISan Marcos (CSUSM)
Eyasungulwa ngo-1989, iCal State iSan Marcos yenye yezona zikolo ezincinci kwinkqubo yeCal State. Iyunivesithi inikezela abafundi abagqwesileyo kwizifundo ezi-44 kwiinkalo zobugcisa, ubuntu, isayensi yezentlalo, izazinzululwazi kunye nezobugcisa. Ulawulo lwezoshishino lulona luphawu olugqithiseleyo phakathi kwabafundi abaphumelele kwizifundo xa imfundo yinkqubo enkulu yenkosi.
Indawo: San Marcos, California
Ubhaliso: 13,144 (12,567 izifundo zakudala)
Ukufumana iinkcukacha kwiindleko, uncedo lwezemali, amaxabiso okuwamkela kunye nokunye, funda iprogram yeCal State San Marcos .
ILayibrari yeNyuvesi yaseSonoma. Stepheng3 / Wikimedia Commons
I-University of Sonoma i-269-acre campus isekhilomitha ezili-50 kumntla weSan Francisco kwezinye zelizwe laseCalifornia elifanelekileyo kwilizwe lewayini. Isikolo sinabomi bobabini obulondolozayo obonelela ngamathuba okuphanda kwabafundi kwizendalo zendalo. Izikolo zase-Sonoma zoBugcisa noBuntu, iShishini kunye nezoQoqosho, kunye nezoNzululwazi zentlalo zixhaphake kakhulu phakathi kwezifundo zakudala.
Indawo: Rohnert Park, California
Ubhaliso: 9,323 (8,631 izifundo zakudala)
Ukufumana iinkcukacha kwiindleko, uncedo lwezemali, amaxabiso okwamkelwa kunye nokunye, funda iprofayili yase State Sonoma .
California State University Stanislaus. King Chad / Flickr
CSU Stanislaus itholakala eSan Joaquin Valley empuma yeSan Jose. Iyunivesithi ibonakaliswe ngokubaluleka kwayo, umgangatho wemfundo, amanyathelo enkonzo yoluntu kunye nemizamo eluhlaza. Phakathi kwezifundo zokugqibela, ulawulo lwezoshishino lulona lukhulu kakhulu. I-campus-like campus i-228-acre i-campus ifaka i-$ 16 yezigidi zezemidlalo eziyinkimbinkimbi.
Indawo: Turlock, California
Ubhaliso: 9,762 (i-8,620 izifundo zakudala)
Ukufumana iinkcukacha kwiindleko, uncedo lwezezimali, amaxabiso okuwamkela kunye nokunye, funda iprofayile yeSSU Stanislaus .
U-Aries kunye neLibra Uthando olufanelekileyo
I-Long Telegram kaGeorge Kennan: Ukuzalwa koContain
Ukukhula nokunyamekela i-Norfolk Island Pine
I-Crystal Pinecone Ornaments
I-Heisenberg Incertainty Principle Inkcazo
Indlela yokukhanyisa ikhandlela ngeNjongo
Ubugcisa kunye ne-Architecture ye-Stucco
I-Soft Insults ngesiJamani kunye Nento Eyithethayo
Imfazwe yaseFransi neyamaNdiya / iMfazwe Yeminyaka Ye sixhenxe: Ingqwalaselo
Ukubhalwa kweengxoxo zoNxibelelwano noNxibelelwano Ngiyabonga amanqaku